हल्लाको भर नपरौं, नेपालमा अहिलेसम्म कसैलाई कोरोना भेटिएको छैन : डा. झा - Music Our Choice
एम.ओ.सी.	 On Mar 5, 2020
काठमाडौ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा.रुना झाले नेपालमा आफूहरुले अहिलेसम्म गरिएको परीक्षणमा कसैलाई पनि कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नभेटिएको स्पष्ट पारेकी छिन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपालमा यो भाईरसको परीक्षण हाम्रो ल्याबमा मात्रै हुन्छ, सुरुमा हामीले पनि यसको नमूना परीक्षण हङकङ पठाएका थियौं । त्यतिबेला हामीलाई ठूलो क्रिटिसिजम पनि भयो । तर, अहिले हामी आफैंले परीक्षण सुरु गरिसकेका छौं ।’
बुधबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै निर्देशक झाले कोरोनाको परीक्षण थ्रोट स्वाब र नाकबाट पनि लिने गरिएको सुनाइन् । र, उनले कोरोनाको लक्षण बाहिर कुरा आएजस्तै रुघाखोकी र ज्वरा नै भएको सुनाइन् ।
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यो भाईरसको परीक्षणको लागि लामो प्रक्रिया भएको पनि सुनाईन् । उनले भनिन्, ‘यसको परीक्षण भनेको पिसिआर। हो, हामीले पनि रियल टाईम पि.सि.आर. हेर्ने हो ।’ आफूहरुसँग अहिले चार वटा मेशिन रहेको पनि उनले सुनाईन् ।
उनले आफूहरुको ल्याबलाई डब्लु।एच।ओ।ले मान्यता दिएको सुनाउँदै हप्तामा ५ सय जनाको परीक्षण गर्न सकिने ल्याबको क्षमता सुनाइन् । उनले हालैमात्रै दक्षिण कोरियाबाट आएको नेपाली जसलाई ‘श्वासप्रश्वासको समस्या र ज्वरो आएको थियो’ परीक्षण गर्दा उनको पनि रिजल्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिइन् ।
उनले आफूहरुले ल्याबमा काम गर्दा उच्च सतर्कता अपनाएको पनि विश्वास दिलाइन् । उनले नेपाललाई कोरोनामुक्त बनाउनको लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने र आफूले पनि यही कामना गरेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘सबैले मास्क प्रयोग गरौं । विशेषतः रुघाखोकी लागेकाहरुले झनै यसको प्रयोग गर्न जरुरी छ । लगातार साबुन पानीले हात धुनुपर्छ ।’ उनले यो भाइरस हावामा कति दिनसम्म बाँच्न सक्छ रु भनेर अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्य बाहिर नआएको पनि स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन्, ‘यो विषय अहिले पनि अध्ययनको विषय हो । १०० प्रतिशत रिसर्च भैसकेको छैन् ।’ यद्यपि ९ दिनसम्म पनि बाँच्ने र कसैले २४ देखि ४८ घण्टासम्म पनि बाँच्छ भनेको उनले सुनाइन्
एमर्जेन्सी बाहेक घर बाहिर ननिस्कन काठमाण्डौ बासीलाई जिल्ला प्रशासनको आग्रह (बिज्ञप्ति…